NAB Show ကိုသတင်းထုတ်လွှင့်ဘိ, NAB ပြရန်၏တရားဝင်ထုတ်လွှင့်ခြင်းဖြင့် - - NAB Show ကိုတိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်ရေးသက်သေပြ Dynamic ကြော်ငြာ INSERT, ပလေးအောက်နှင့် BroadcastAsia 2019 မှာတိုက်ရိုက်ထုတ်လုပ်မှု Solutions ပြမြင်ယောင်ကြည့်ပါ
GatesAir TVN ချီလီဒီဂျစ်တယ်တီဗီထုတ်လွှင့်မှုစာချုပ်ကိုအနိုင်ရရှိခဲ့သည်
တရုတ်နိုင်ငံရှန်ဇီရုပ်မြင်သံကြားသည်၎င်း၏စတူဒီယိုအသစ်အတွက် Second Calrec Brio Console ကိုဝယ်ယူသည်
Evercast, LLC သည် Steven B. Cohen ကို Los Angeles ရှိ Los ၀ ံဂေလိဆရာအဖြစ်ခန့်အပ်သည်
Orby TV မှရွေးချယ်သော Globecast သည် US pay-as-you-go DTH ဂြိုလ်တုဝန်ဆောင်မှုအတွက်မီဒီယာလုပ်ငန်းများလုပ်ဆောင်ရန်အတွက်ရွေးချယ်သည်
SPORTELMonaco 2019 - အားကစားနှင့်သက်ဆိုင်သောအားကစားပါဝင်မှုနှင့်ဖြန့်ဖြူးမှုများကို LiveU နှင့်အားကစားအားကစားအဖွဲ့မှပြသမည်။
Insight TV သည်ဗြိတိန်နိုင်ငံရှိ Virgin Media ၏ 4K UHD ရုပ်သံလိုင်းတွင်အမှတ်တံဆိပ်ကိုပိတ်ပင်ထားသည်
Switch Media သည်ကုန်ကျစရိတ်သက်သာပြီးလျင်မြန်စွာစျေးကွက်သို့ရောက်ရှိနိုင်သော OTT Platform MediaHQ Lite ကိုပြသသည်
FSR ၏ Smart-Way စနစ်သည် NECA 2019 အတွင်းတွင်ပြပွဲကိုရပ်လိုက်သည်
Content Delivery & Security Association သည်အကြောင်းအရာများကိုကာကွယ်သည့်လကို Bob Gold & Associates နှင့်စတင်ခဲ့သည်
Kevin Joyce သည် TAG Video Systems မှစီးပွားဖြစ်အရာရှိချုပ်အဖြစ်ခန့်အပ်ခြင်းခံရသည်
Home » သတင်း » ဆက်သွယ်ရေး BroadcastAsia 2019 မှာသက်သေပြ Dynamic ကြော်ငြာ INSERT, ပလေးအောက်နှင့် Live ထုတ်လုပ်မှု Solutions ပြမြင်ယောင်ကြည့်ပါ
ဆက်သွယ်ရေး BroadcastAsia 2019 မှာသက်သေပြ Dynamic ကြော်ငြာ INSERT, ပလေးအောက်နှင့် Live ထုတ်လုပ်မှု Solutions ပြမြင်ယောင်ကြည့်ပါ
ဟောင်ကောင်, 14 ဇွန်လ 2019 - ဆက်သွယ်ရေးမြင်ယောင်ကြည့်ပါ (- 2019 ဇွန်လ, Suntec စင်္ကာပူ, နံပါတ် 18C20-4 ရပ် 2) ပြောင်းလဲနေသောကြော်ငြာ, မီဒီယာဗိသုကာနှင့် BroadcastAsia 04 မှာ IP ကိုအကူးအပြောင်းမှုအတွက်သူ့ရဲ့နောက်ဆုံးရဖြေရှင်းချက်ကိုသရုပ်ပြပါလိမ့်မယ်။ ကနေကျွမ်းကျင်သူတွေကအာရှပစိဖိတ်ဒေသထဲမှာရဲ့စဉျးစားကွညျ့ကျယ်ပြန့်အဖွဲ့ကသူတို့ကိုလာမယ့်မျိုးဆက်ဗိသုကာနှင့်စီးပွားရေးမော်ဒယ်၎င်းတို့၏နည်းပညာဆိုင်ရာပလက်ဖောင်းတိုးဖို့ခွင့်ပြုကြောင်းရွှေ့ပြောင်းမဟာဗျူဟာရှာဖွေနေစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအတွက် In-depth ကိုထောကျပံ့ပေးဘာသာရပ်ခေါင်းဆောင်များကပူးပေါင်းလိမ့်မည်။ ဤသည်ချဉ်းကပ်မိမိတို့ကိုယ်ပိုင်အရှိန်အဟုန်မှာ IP ကို-connected, ဆော့ဖ်ဝဲ-defined အနာဂတ်၎င်းတို့၏အကူးအပြောင်းပုံဖော်ဖို့မီဒီယာကုမ္ပဏီနိုင်ပါတယ်။
"နည်းပညာဆန်းသစ်တီထွင်မှုများ၏လက်ရှိလှိုင်းလုပ်ငန်းလည်ပတ်စရိတ်များလျှော့ချခြင်းနှင့်အရှေ့တောင်အာရှ, ပစိဖိတ် Rim နှင့်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းကမီဒီယာကုမ္ပဏီများအတွက်ငွေရှာခြင်းအတွက်အခွင့်အလမ်းတွေတိုးပွားလာနေပါတယ်" ဟုမကြာသေးမီကပူးပေါင်းသူကိုဂျေဆန် Cheng ကပြောသည် ဆက်သွယ်ရေးမြင်ယောင်ကြည့်ပါ နည်းပညာဆိုင်ရာအရောင်းမန်နေဂျာ OTT ဒစ်ဂျစ်တယ် Advertising ကြော်ငြာ, ပွေးအဖြစ်။ "ဟုအဆိုပါပွေးဒေသထိပ်တန်းမီဒီယာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများဤမျှလောက်များစွာသောနှင့်အတူကျွန်ုပ်တို့၏အနီးကပ်အလုပ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်တိုင်းပလက်ဖောင်းတစ်လျှောက်ဆွဲဆောင်မှုအကြောင်းအရာကယ်နှုတ်တော်မူနှင့်စီးပွားရေးအောင်မြင်မှုကားမောင်းဖြစ်ကြောင်းသစ်ကိုကြော်ငြာမော်ဒယ်များဖန်တီးကူညီပေးနေဖြစ်ကြောင်းထုတ်ကုန်သစ်များ, ဖြေရှင်းချက်များနှင့်စနစ်များဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး shaped သိရပါတယ်။ "
BroadcastAsia မှာ, ဆက်သွယ်ရေးမြင်ယောင်ကြည့်ပါ အဆိုပါ: linear နှင့် OTT ကြော်ငြာပြောင်းလဲနေကြသည်နှစ်ခုသော့ချက်အစိတ်အပိုင်းများကိုပြသပါလိမ့်မယ် ထုတ်လွှင့်မာစတာ™ suite ကိုနေ့စဉ်စစ်ဆင်ရေး၏အလိုအလျောက်နဲ့အမှား-အခမဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုခွင့်ပြုထားတဲ့; နှင့် ပစ်မှတ်ထား Delivery ရွယ်တိုးမြှင့်နှင့်အသစ်ပြောင်းလဲနေသောကြော်ငြာဝင်ငွေအခွင့်အလမ်းများကို၏အားသာချက်ယူ MVPDs, ထုတ်လွှင့်ခြင်းနှင့်ပရိုဂရမ်များ၏စွမ်းရည်ကိုပိုကောင်းအောင်နိုင်သည့် OTT နှင့် Linear ဖြန့်ဖြူးဘို့ဖြေရှင်းနည်းများ။
ထုတ်လွှင့်ကုန်ထုတ်စွမ်းအားနှင့်ဝင်ငွေကိုမောင်းဖို့လိုအပျတနျခိုး, ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ခြင်းနှင့်အလိုအလျောက်စွမ်းရည်ပေးခြင်း - ရဲ့စဉျးစားကွညျ့အသံလွှင့်မာစတာ linear နှင့် nonlinear အခွင့်အရေး, အရောင်း, အချိန်ဇယားဆွဲနှင့်မီဒီယာများအတွက် modular နှင့်အရွယ်မှာစီမံခန့်ခွဲမှုဖြေရှင်းချက်တစ်ခုပြည့်စုံ suite ကိုဖြစ်ပါတယ်။ မဆိုအင်တာနက်ကိုဗဟိုပြုသို့မဟုတ် On-demand အရင်းအမြစ်, ဘက်ပေါင်းစုံ linear / nonlinear စစ်ဆင်ရေး, မိုဃ်းတိမ် DVR သို့မဟုတ်အချိန်ပြောင်းလဲအကြောင်းအရာ applications များထံမှ streaming ကိုဗီဒီယိုအပါအဝင် - - OTT များအတွက်ပစ်မှတ်ထား Delivery ဖြေရှင်းချက်အကြောင်းအရာဖြန့်ဖြူးပတ်ဝန်းကျင်မှာနှင့်ဝန်ဆောင်မှုဟာယပူဇော်သက္ကာ၏ကျယ်ပြန့်အမျိုးမျိုးကိုထောကျပံ့အဖြစ် လျှပ်စစ်ဓါတ်အားများပြတ်တောက်ခြင်းနှင့်အခြားအကြောင်းအရာလုပ်ဆောင်ချက်များကို။ linear ဖြန့်ဖြူးဘို့ပစ်မှတ်ထား Delivery ဖြေရှင်းချက်မြင့်စရိတ်နှင့်အမွေစနစ်များတရားရှိဖို့ဟာ့ဒ်ဝဲအခမဲ့ချိုးဖျက်ဖို့မီဒီယာကုမ္ပဏီများသည်ကို enable; တိုးမြှင့်သတ်မှတ်ခြင်းနှင့်ဒေသတွင်းစွမ်းရည်မှတဆင့်ပိုမိုမြင့်မား CPMs မောင်း; နှင့်စပွန်ဆာလျင်မြန်စွာစျေးကွက်ဆိုင်းလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်ကူညီပေးဖို့အမှန်တကယ်အချိန်အတွက်ကြော်ငြာအစားထိုးလိုက်ပါ။
တိုက်ရိုက်လွှထုတ်လုပ်မှု, မာစတာထိန်းချုပ်မှုများနှင့်ပလေးအောက်များအတွက်မီဒီယာနည်းပညာဆိုင်ရာအခြေခံအဆောက်အဦ, IP ချိတ်ဆက်နှင့်အတူဆော့ဖျဝဲ-ဗဟိုပြုဒီဇိုင်းများဆီသို့ပြောင်းရွှေ့အဖြစ် ဆက်သွယ်ရေးမြင်ယောင်ကြည့်ပါ အရာနှစ်ဦးစလုံး plug ကိုတတ်နိုင်သမျှနှင့်အမွေစနစ်များနှင့်အတူဆော့ကစားကာအပြည့်အဝ virtualised, Cloud နှင့် IP-အဆင်သင့်အနာဂတ်၏အခြေခံအုတ်မြစ်ဖွဲ့စည်းရန်ထုတ်ကုန်နှင့်အတူရိုးရာဟာ့ဒ်ဝဲနေ Self-ပွေးညီအကူးအပြောင်းအောင်ထုတ်လွှင့်မှုအတွက်အကြောင်းပြချက်ထောက်ခံမှုပေးနေဆဲဖြစ်သည်။
BroadcastAsia 2019 မှာဆန္ဒပြပွဲများပေါ်တွင်တည်ဆောက်ပလေးအောက်ကိုလုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းအတွက်နောက်ဆုံးပေါ်ပါဝငျမညျ Versio ™ modular ပလေးအောက် ပလက်ဖောင်း။ စီးပွားဖြစ် Off-the-ကမ်းလွန်ရေတိမ်ပိုင်း (COTS) ဟာ့ဒ်ဝဲအပေါ် software ကိုချန်နယ်အပေါငျးတို့သလုပ်ဆောင်ချက်ကိုများကို Versio ချောမွေ့စွာပြုလုပ်မီဒီယာကုမ္ပဏီများသည်လက်ရှိစစ်ဆင်ရေးကိုချဲ့ထွင်ရန်အဘို့အကာစံပြပလက်ဖောင်းအောင်, မည်သည့်ဗိသုကာသို့ကိုက်ညီပါကတစ်ဦးအတွက်အပြည့်အဝစွမ်းဆောင်ရည်ပေးသွားမှာပါယုံကြည် အနာဂတ် software ကို-defined ကွန်ယက်ကို။
Versio ပေါ်တွင်တည်ဆောက်ဖြစ်ပါတယ် ဆက်သွယ်ရေးမြင်ယောင်ကြည့်ပါ'' တော်လှန်ရေး Zenium ™ microservices ဗိသုကာ, မလိုအပ်သောအပြောင်းအလဲနဲ့သံသရာ, ပါဝါ, ထိန်သိမ်းအာကာသနှင့်လေအေးပေးစက်များအတွက်တောင်းဆိုချက်များကိုအသေးအဖွဲ, COTS devices များသို့မဟုတ်အထူးပြုဟာ့ဒ်ဝဲပလက်ဖောင်းသုံးပြီးအတိအကျလုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကိုတညျဆောကျခံရဖို့ခွင့်ပြုထားတဲ့။ အခြားအ microservices-based ဖြေရှင်းချက်အလွန်လူကြိုက်များအပါအဝင် BroadcastAsia မှာပြသပါလိမ့်မည် သင်္ဘော MV မြင်ကွင်းစုံ™ EPIC အရာပြိုင်ဘက်ကင်းစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုပါဝါပေးပါသည်။ နယူးလုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကိုခင်းကျင်းပြသ Mosaic ၏ဝေးလံခေါင်ဖျားသို့မဟုတ် IP ဖြန့်ဖြူးဘို့ output ကို compressed သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစီးနိုင်စွမ်းနှင့်ခြွင်းချက်စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုကူညီမှနှိုးစက်၏ကျယ်ပြန့များ၏အနက်နှင့် display ကိုပါဝင်သည်။ အဆိုပါ EPIC သင်္ဘော MV software ကိုလည်းယခုအများဆုံးစွမ်းဆောင်မှုများအတွက် HPE ဆာဗာများ၏နောက်ဆုံးမျိုးဆက်ထောက်ခံပါတယ်။
အခုတော့ကျယ်ပြန့်ဗွီဒီယိုနဲ့အသံအပြောင်းအလဲနဲ့များအတွက်အများဆုံးပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ခြင်းနှင့်ထိရောက်သောပလက်ဖောင်းအဖြစ်အသိအမှတ်ပြုအဖြစ် IP ချိတ်ဆက်သည် Selenio ™ကွန်ယက်ပရို (SNP) ထို့အပြင် BroadcastAsia stand.This ကျစ်လစ်သိပ်သည်း, စံချိန်စံညွှန်းများ-based IP ကိုမီဒီယာအပြောင်းအလဲနဲ့ပလက်ဖောင်းစစ်ဆင်ရေးရိုးရှင်းနှင့် SDI နှင့် IP ကွန်ရက်များနှစ်ခုလုံးကိုထောက်ပံ့, ကုန်ကျစရိတ်လျှော့ချရန် system ကိုဒီဇိုင်နာများဖွမှာ featured လိမ့်မည်။ ယင်းနှင့် တွဲဖက်. မက်ဂျလန်™ Sdn orchestralတစ်ဦးကိုလယ်-သက်သေပြ software ကိုထိန်းချုပ်မှုအလွှာဗိသုကာစွမ်းဆောင်ရည်နှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရ၏ထုတ်လွှင့်စံချိန်စံညွှန်းများဆက်ထိန်းထားစဉ် virtualised ဆော့ဖျဝဲစနစ်များ၏မွေးရာပါပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်၏အားသာချက်ယူဖို့အဆင်သင့်မြင့်မားခေတ်ရဲ့သွက်လက်တဲ့ဖြေရှင်းနည်းများ, ဖန်တီးနိုင်ပါတယ်။
BroadcastAsia 2019 မှာနာယကပလက်ဖောင်းကိုမြင်ယောင်ကြည့်
အုတ် Ecksten, ဆက်သွယ်ရေးမြင်ယောင်ကြည့်ပါ: 'ပလေးအောက် & ကွန်ယက်အဖွဲ့၏ CTO ဖြစ်သူအပါအဝင် BroadcastAsia 2019 စဉ်အတွင်းပြားများနှင့်ပစ္စုပ္ပန်၏နံပါတ်ပါဝင်ပါလိမ့်မည်
•မီဒီယာ Microservices (18 မှာဇွန်လ 16th: ထဲမှာ 00 IABM အနာဂတ် Trends ပြဇာတ်ရုံ, 6th ညီထပ်, တီဗီချိန်း, Suntec စင်္ကာပူ)
•ဒစ်ဂျစ်တယ်-ပထမဦးစွာဆွေးနွေးပွဲ: အမော်ဒန်ခေတ် Panel ကိုများအတွက် Reinventing ရုပ်မြင်သံကြားရဲ့ရည်မှန်းချက် (19 မှာဇွန်လ 11th: 30, အဆင့် 3, Suntect စင်္ကာပူ)
•မီဒီယာ Microservices: တန်ခိုးကြီးသောအဆောက်အအုံလုပ်ကွက်ဆန်းသစ်သောဖျတ်လတ်သွက်လက်စေနှင့်အရွယ်မှာလုပ်ပိုင်ခွင့်ပေးခြင်း (19 မှာဇွန်လ 15th: 20, အဆင့် 3, Suntect စင်္ကာပူ)
အလည်အပတ် ဆက်သွယ်ရေးမြင်ယောင်ကြည့်ပါ ရပ်တည်ချက်အရေအတွက်ကို 2019C4-2 အပေါ် BroadcastAsia 04 မှာ။ အကြောင်းပိုမိုသိရှိလိုပါက ဆက်သွယ်ရေးမြင်ယောင်ကြည့်ပါ'' ထုတ်ကုန်များနှင့်ဖြေရှင်းနည်းများ, သွားရောက်ကြည့်ရှုကျေးဇူးပြုပြီး www.imaginecommunications.com.
ဆက်သွယ်ရေးမြင်ယောင်ကြည့်ပါ ေူပာင်းလဲဆန်းသစ်တီထွင်မှုကနေတဆင့်မီဒီယာနှင့်ဖျော်ဖြေရေးစက်မှုလုပ်ငန်းအာဏာ။ ကမ္ဘာတဝှမ်းထုတ်လွှင့်, ကွန်ယက်များ, ဗီဒီယိုကဝန်ဆောင်မှုပေးသူများနှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကသူတို့မစ်ရှင်-အရေးပါသောလုပ်ငန်းများကိုထောက်ပံ့ဖို့နေ့တိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ optimized, futureproof, multiscreen ဗီဒီယိုနှင့်ဝင်ငွေပေးရန်ဖြေရှင်းချက်အပေါ်အားကိုး။ ယနေ့ကမ္ဘာ့ဗီဒီယိုအားလိုင်းများ၏တစ်ဝက်နီးပါးကျွန်တော်တို့ရဲ့ထုတ်ကုန်ဖြတ်သန်း, ငါတို့ software ကိုဖြေရှင်းချက်အနီးကပ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာကြော်ငြာဝင်ငွေတတိယဖို့ကားမောင်း။ စဉ်ဆက်မပြတ်တီထွင်ဆန်းသစ်မှုမှတဆင့်ကျနော်တို့အများဆုံးအဆင့်မြင့်အိုင်ပီ, စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက် cloud-enabled, ဆော့ဖ်ဝဲ-defined ကွန်ယက်နှင့်လုပ်ငန်းအသွားအလာဖြေရှင်းချက်ပို့ဆောင်နေကြသည်။ အလည်အပတ် www.imaginecommunications.com။ ပိုမိုသိရှိလိုပါကအဘို့နှင့် Twitter ပေါ်တွင်ကျွန်တော်တို့ကိုလိုကျနာ @imagine_comms.
ကယ်ရိုလိုင်း Shawley အားဖြင့်နောက်ဆုံးပေါ်ရေးသားချက်များ (အားလုံးကြည့်ရှု)
Artjail Baselight အရောင်ငယ်များအတွက်လက်ဖက်ရည်နှင့်အတူဘားပေါ်ပေါက် - အောက်တိုဘာလ 3, 2019
နယူးစတော့အိတ် Facility ၏ဖွင့်ပွဲနှင့်အတူအရှေ့အလယ်ပိုင်းစျေးကွက်မှ Argosy အားကောင်းလာစေရန်ကတိသစ္စာ - အောက်တိုဘာလ 3, 2019
3G နှင့် Holographic နည်းပညာကိုသုံးပြီး Dejero ကမ္ဘာ့ပထမဦးဆုံးတိုက်ရိုက်ရော့ခ်ဖျော်ဖြေပွဲများအတွက် Musion 5D နှင့် Vodafone ရိုမေးနီးယားဝင်းစက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များဆုချီးမြှင့် - စက်တင်ဘာလ 16, 2019
အုတ် Ecksten ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်မာစတာ suite ကို BroadcastAsia COTS ဟာ့ဒ်ဝဲ ပြောင်းလဲနေသောကြော်ငြာ ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ် ဆက်သွယ်ရေးမြင်ယောင်ကြည့်ပါ IP ကိုအကူးအပြောင်း ဂျေဆန် Cheng မီဒီယာဗိသုကာ MKM Marcomms MKM Marketing ကိုဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီး ကိုယ်ပိုင်နှုန်းထား အရွယ်မှာ ဘာသာရပ်ခေါင်းဆောင်များသည် ပစ်မှတ်ထားပေးပို့ဖြေရှင်းနည်းများ က Ultra HD ဖိုရမ် ဗီဒီယိုကိုအင်ဂျင်နီယာချုပ်	2019-06-14
ယခင်: Arvato စနစ်များအမည်များ Kurt Krinke ဒုတိယသမ္မတအရောင်း - မြောက်အမေရိကမှာထုတ်လွှင့်ဖြေရှင်းနည်း
နောက်တစ်ခု: Areia ဖန်ဆင်းခြင်း Blackmagic ဒီဇိုင်းကင်မရာများကို, Blackmagic RAW နဲ့ DaVinci ဖြေရှင်းရန်နှင့်အတူ KPOP ပါ Music Videos တွေတင်
အစားအစာဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း / အချက်အချာလက်ထောက် (FT & PT) HOLLY CREEK & SOMEREN GLEN - သင်တန်းတက်ပါမည်
ဂိမ်းစတူဒီယို 3D အဆိုတော် (အလွတ်တန်း)
ကို Creative ဗီဒီယို Manager ကို